घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू पल Pogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
हाम्रो पॉल पोग्बा जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी (मारिया सलास), बच्चा (लैबिले शाकुर), जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, हामीसँग यहाँ छ फ्रान्सेली लडाकू फुटबलरको पूरा इतिहास। हाम्रो कथा उसको शुरुका दिनहरूदेखि शुरू हुन्छ, जब उनी खेलमा प्रख्यात भए। को संलग्नता प्रकृति मा तपाइँको आत्मकथा भूख whet गर्न पल पोगाबाको बायो, यहाँ उनको जीवन प्रक्षेपको चित्रमय सार हो।
पॉल पोग्बाको जीवनी - शुरुआती दिनदेखि प्रख्यात।
हो, सबैलाई थाहा छ म्यानचेस्टर युनाइटेडले पुन: हस्ताक्षर गरे फ्रान्स मिडफिल्डर विश्व २०१ record मा जुवेबाट m m मी। त्यसबेलादेखि उनले प्रशंसकहरूलाई प्रमाणित गरे कि उहाँ शक्तिशाली, निपुण, रचनात्मक हुनुहुन्छ - लक्ष्यका लागि आँखा र दर्शकहरूको लागि पेन्चन्ट सहित।
यो सम्मानको बावजुद, हामी बुझ्छौं कि धेरैजनाले उनको पोग्बाको जीवन कहानीमा विस्तृत लेख पढेका छैनन्। हामीले यो तयार गरेका छौं, तपाईंको लागि र यो पनि, प्रेमको लागि। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
पल पोग्बा बाल्यकाल कहानी:
सानो पल पोग्बा बच्चाको रूपमा। फोटो उनको जन्म पछि लिइएको थियो।
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले मनपर्ने मनपराउ ला पिओचे उपनाम लिन्छ। पल लैबिले पोग्बा मार्च १ 15 1993 March को १ XNUMX औं दिन उनकी आमा, यो मोरिबा पोग्बा र बुवा, फास्स एन्टोइन पोग्बाको जन्म फ्रान्सको पेरिसको पूर्वी उपनगरहरूमा पर्ने लैग्नी-सुर-मार्नेमा भएको थियो।
फ्रान्सेली तारा आफ्ना आमा बुबा जो दुवै आप्रवासी बीचको मिलनबाट जन्मेका तीन बच्चाहरूमध्ये कान्छी हुन्। पल पोग्बालाई उनको आमाको केही महिना पछि जन्म दिइयो, यो यो मोरिबाले गुनियालाई पूर्ण रूपमा फ्रान्समा बसोबास गर्न छोडे। धन्यबाद, उनीहरूको अन्तिम जन्म बच्चा विदेशमा गर्व परिवारका लागि फ्रान्सेली नागरिकता प्राप्त।
पल पोग्बाका अभिभावक - उनीकी आमा (येओ मोरिबा पोगबा) र कोमल बुबा (फसाउ एन्टोइन पोगबा) लाई भेट्नुहोस्।
आफ्नो जन्म हुनुभन्दा अघि येओ मोरिबा र फासो एन्टोइनले फ्लोरेन्टिन र म्याथियस नामका जुम्ल्याहा समूह बनाए जो पल पोग्बाका ठूला भाइहरू हुन्। उनीहरूको आमाले फ्रान्समा बसोबास गरिरहेका फासो एन्टोइन (तिनीहरूका बुवा) लाई सामेल गर्न विदेश यात्रा गरेको समयमा केटाहरू तुलनात्मक रूपमा जवान थिए। त्यस समयमा उनीहरू कन्याक्री, गुयनामै बसे जुन उनीहरू अफ्रिकामा रहेको आफ्नै देश हो।
उनीहरूको येओ मोरिबा फ्रान्समा बसोबास गर्ने बित्तिकै, फ्लोरेन्टिन र म्याथियस आफ्ना बाबुआमासँग पुनर्मिलन गरे। जुम्ल्याहा (अँध्यारो देखिने) आमाको सान्त्वनाको लागि खुशी थिए, जुन गुनी, पश्चिम अफ्रिकामा केही वर्ष कठिन अवस्थामा थिए। यहाँ सानो पावललाई उनकी आमासँग भेटिएको छ - दुबै ताजा देखिदै गरेको छ, फ्रान्सेली मौसमको प्रमाणलाई दर्साउने काम।
उसको हेराईबाट हेर्दा तपाई यसो भन्न सक्नुहुनेछ कि पॉल पोग्बा बचपनदेखि नै मम्मीको केटा हुनुहुन्छ। यस समयमा फ्लोरेन्टिन र म्याथियस (जुम्ल्याहा) भर्खर अफ्रिकाबाट आएका थिए।
के हुर्कदै गरेको पो पल पोग्बाको जस्तो देखिन्थ्यो:
येओ मोरिबाले आफ्ना तीन छोरा (एक्लै) लाई पेरिसको पूर्वी, रोसी-एन-ब्रीमा रेनार्डियर आवास सम्पत्तीमा हुर्काइन्। त्यहाँ, ब्लाक १ in मा एभिन्यू अगस्टे रेनोइरको यस ठूलो भवनमा, पावल म्याथियस र फ्लोरेनटिनसँग हुर्केका थिए, जो उनी भन्दा तीन वर्ष ठूला थिए।
यो निवास ला रेनार्डर, रोसी-एन-ब्रीको सामान्य दृश्य हो, एस्टेटमा जसमा पॉल पोग्बाले बाल्यावस्था बिताए।
अनुसन्धानबाट, त्यहाँ रहिमत छिमेकको बारेमा धेरै खतराको केही थिएन जहाँ येओले पोगबा ल्याएका थिए। त्यहाँ बस्ने मानिसहरू मित्रैलो र स्वागतयोग्य छन्। यद्यपि एक पटक रेनार्डियर एस्टेटमा दots्गा तोडिएको छ। यो धेरै वर्ष अघि भएको थियो जब पॉल पोग्बा थोरै थिए। आप्रवासी पृष्ठभूमिका युवाहरूले रोजगारीदेखि लिएर पोलिसि toसम्मका सबै कुरामा भेदभावको रूपमा देखेको कुराको विरोध गर्छन्।
पल पोगबा एउटा छिमेकमा हुर्केका थिए कि उनको बाल्यकालको अवधिमा हिंसाको साक्षी थियो।
त्यतिखेर, ड्रग्सको प्रयोग पनि रेनार्डियर एस्टेटमा उपलब्ध थियो र गैंगस्टर्स प्रायः फिट, स्पोर्टी युवाहरू पोगबा भाइहरू भर्ना गर्ने प्रयास गर्दछन्। धन्यबाद येओ मोरिबा खोजीमा थिए। उनले पावल, म्याथियस र फ्लोरेनटिनलाई सफा राखिन् र कुनै पनि किसिमको सामूहिक समस्यामा संलग्न नभएको सुनिश्चित गरिन्।
बाहिरी व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट, यो यति अविश्वसनीय छ कि रेनार्डियरले पावल जस्ता सुपरस्टार फुटबलर उत्पादन गर्न सक्दछन्। एस्टेटका छिमेकीहरू मध्ये एक अहमदले भनेका थिए कि रेनार्डियरका अधिकांश बच्चाहरू अहिले पेरिसको रेष्टुरेन्टहरूमा वा इलेक्ट्रीशियन र प्लम्बरको रूपमा काम गर्छन्। आज, तिनीहरू सबै सपना - उनीहरू आफ्ना बच्चाहरू पावल जस्तो भएको हेर्न चाहन्छन्। सबै भन्दा सफल मानिस एस्टेट मा हुर्कनु।
पल पोग्बा परिवार पृष्ठभूमि:
फ्रान्सेली मिडफिल्डर एक भाँचिएको घरबाट आउँदछ। वर्ष १ 1996's Paul मा, पॉल पोग्बाका अभिभावक येओ मोरिबा र फासो एन्टोइन दुई वर्षको हुँदा छुट्टिए। त्यसबेलादेखि, पेरिसको उपनगरीय समतल फ्ल्याटमा, तीनजना आमाले अत्यन्तै मेहनतका साथ आफ्ना केटाहरूलाई एक्लो बनाए।
सम्बन्धविच्छेद र अलग्गै सम्बन्धमा फ्रान्सेली कानूनका अनुसार यो यो मोरिबाले आफ्ना पतिलाई बच्चाहरूसँग सम्बन्ध गाँस्न अनुमति दिने सम्बन्धमा एउटा मायालु सम्झौता गरे। यस कारणले गर्दा, पावलले आफ्ना बुबाहरूसँग एक घनिष्ठ सम्बन्धको आनन्द उठाए। सत्य भन्न सकिन्छ, यो एक मानिस हो जसले आफ्नो छोराको क्यारियरको जग राख्दछ। आफ्नो बाल्यावस्थाको समयमा पावलले बयान गर्दै, Fassou Antoine Pogba एक पटक भने;
पॉल पोग्बा नम्र उत्पत्तिबाट विशाल सम्पत्ति बटुलेको छ। यस फुटबलर र उनको बुबा (Fassou Antoine Pogba) आफ्नो बाल्यकाल मा धेरै नजिक थियो।
सानो छँदा, जीवनको बारेमा धेरै कुरा जान्न उत्सुक थियो। उसको दिमाग खुल्ला थियो, यति ठुलो, उसको उमेर भन्दा पर।
पावललाई केहि विषयहरूको गहन ज्ञान थियो। मैले उसलाई धेरै चीजहरू गर्न र उसको चाहनालाई अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गरें जुन उनले फुटबलमा गरेका थिए।
जब मैले पहिलो पटक पावल फुटबल खेलेको देखें, तब म यसको टेकनीकले तिनका साथीहरूबाट हराएको देखें। पावल चार बर्षको थियो, र ऊ सँधै ठूला केटाहरूसँग खेल्थ्यो जो ऊ भन्दा ठूला थिए।
पल पोग्बाको परिवार उत्पत्ति:
जे होस् फ्रान्समा जन्म र प्रजनन भए पनि फुटबलर अफ्रिकी वंशको हो। पॉल पोग्बाको परिवार जरा कंगो प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र (उनको आमाको देश) र गिनियाबाट आएको छ जुन पश्चिमी अफ्रिकाको तटवर्ती देश हो जहाँ उनी बुवाबाट आएका हुन्। गुणियालाई कहिलेकाँही गिन्नी-कन्ryक्री भनेर चिनिन्छ ताकि यसलाई गुनिआ बिसाउ र इक्वेटोरियल गुयना भन्दा फरक गर्न सकिन्छ जसको विरोधाभासपूर्ण नामहरू छन्।
पल पोग्बाको उत्पत्ति गुयनाबाट भएको हो, जुन पश्चिम अफ्रिकी तटको किनारमा अवस्थित छ।
पल पोग्बा जन्मनु भन्दा अघि गिनीले सैन्य उत्पीडन, कुटपिट, मानव अधिकार उल्ल .्घन र व्यापक आर्थिक मन्दीको साक्षी पाए। यस कार्यले गर्दा धेरै बासिन्दा फ्रान्समा लाग्न बाध्य भएका कारण त्यहाँ बसाई सर्न बाध्य भयो। Fassou Antoine देश छोडेर गयो। येओ मोरिबा (उनकी श्रीमती) र उनका बाँकी बच्चाहरू पछि उहाँसँग सामेल भए।
पल पोग्बाको शिक्षा:
रेनार्डियर हाउसिंग एस्टेटका धेरै अभिभावकहरूले जस्तै योयो मोरिबाले पनि आफ्ना बच्चाहरूको लागि औपचारिक शिक्षाको अवधारणालाई कल्पना गर्‍यो। अनुसन्धानमा यो छ कि पोग्बा (उमेर 6) ले औपचारिक शिक्षा रोसी-एन-ब्रीमा प्राप्त गरे - जहाँ उनीसँग फुटबलको पहिलो स्वाद थियो।
ठीक समयमा फुटबल खेल्न सुरु गर्नुहोस्। धेरै निर्दोष र केन्द्रित देखिएको।
स्कूलमा छँदा, सानो पावल बाँच्नको लागि फुटबल खेल्ने बढी उत्सुक भए। उनले आफ्नो बुवाको सल्लाह अनुसरण गरे र करियर बनाउन शुरू गरे। लचिलोपनको खोजीमा - यो सुनिश्चित गर्दै कि उनको शिक्षाले कष्ट नपाओस्, यो मोरिबाले उनको अन्तिम जन्मेको बच्चालाई होमस्कूल गरे।
पल पोग्बा फुटबल कहानी (प्रारम्भिक दिनदेखि फेम):
बच्चाहरूको रूपमा, तीनै जना भाइहरू खेलमा दुर्व्यसनी भए कि उनीहरूका आमा-बुबाले (तपाईंलाई छुट्टिए पनि) तिनीहरूलाई समर्थन गरे। येओ मोरिबा र फासो एन्टोइनले वास्तवमै आफ्ना बच्चाहरूको सोखको ख्याल राख्दछन्। प्रारम्भमा, दुबै विश्वस्त थिए कि फुटबल परिवारको एकमात्र पेशा हुनेछ।
पल पोग्बाका बुबाका लागि, यो उसले आफ्नो विगतको गल्ती सच्याउने बारेमा थियो। दरिद्र बुबालाई आफ्नो परित्याग गरिएको फुटबल सपनाहरूको सामना गर्न गाह्रो थियो। Fassou Antoine एक समय फुटबलर थियो जो कहिल्यै बनाएन। पल पोग्बाका बाबुआमामा उनी पहिलो थिए जसले आफ्ना बच्चाहरूमा खेलकुदको मोह जगाए।
आफ्नी पत्नीबाट अलग भएकोले फासाउ सल्लाह प्रस्ताव भन्दा बढी गर्न सकेन। उनले यो गरे कि उनकी पत्नी येओ मोरिबाले ती केटाहरूलाई सम्बोधन गरे। फ्रान्सेली मिडियासँग आफ्नो असफल क्यारियर र उनले कसरी आफ्ना बच्चाहरूलाई धक्का दिए भनेर कुरा गर्दै तीनजना बुबाले एक पटक भने;
दुःखको कुरा, मैले त्यस्तो स्तरमा खेले जुन मैले खेल्न चाहेको भन्दा कम थियो। सुरुबाट, म फ्लोरनटिन र म्याथियस र पावल उच्चतम सम्भावित स्तरमा खेल्न चाहन्छु।
म बच्चाहरू थिए जब म तिनीहरू मा साँच्चै गाह्रो थियो र त्यसले तिनीहरूलाई चाँडै सिक्न मद्दत गर्‍यो।
यो बिन्दुमा पुगेँ जहाँ मैले ठूला बच्चाहरूलाई प्रशिक्षण दिन शुरू गरें ताकि उनीहरू चार जना, पाँच, छ वर्षको उमेरमा पावललाई चुनौती दिन सक्थे। म उसलाई उसको उमेर भन्दा ठूलो स्तरमा पुर्‍याउने कोशिश गर्दै थिए।
पॉल पोग्बा प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
छ वर्षको उमेरमा, नौजवानले युएस रोसी-एन-ब्रीसँग सफल परीक्षण गरे जुन सानो परिवारको परिवारबाट २० मिनेट जति टाढामा थियो। आफ्नो पहिलो ठूलो ब्रेक हासिल गर्नु अघि पॉल पोग्बाले क्लबमा सात सत्रहरूको लागि आफ्नो सीपको सम्मान गर्‍यो।
यो युएस रोसी-एन-ब्रीमा पॉल पोग्बा हो, सानो फुटबल क्लब जहाँ सपना साकार हुन्छन्।
यु.एस. रोसी-एन-ब्रीसँग यति धेरै प्रभाव पारिसकेपछि पावल आफू वरपरका मानिसहरू माझ लोकप्रिय भए। एक पारिवारिक मित्र र छिमेकी Sambou Tati, यूएस टोरसी नाम गरेको क्षेत्र मा सबै भन्दा राम्रो किशोर टोलीलाई सम्पर्क गरेर पोग्बाको आमालाई सहयोग पुर्‍यायो। उनीहरूको आँखाको अगाडी कच्चा हीराको बारेमा उनले तिनीहरूलाई खबर गरे तर उनीहरूले देखेनन्।
पोग्बाको सफल परीक्षण थियो जसले उनलाई युएस टोरसीमा सामिल भएको देख्यो। त्यहाँ छँदा, उनले क्लबको अन्डर १ 13 टीमको कप्तानको रूपमा काम गरे। त्यतिखेर तालिम सकिसकेपछि, पावल आफ्ना साथीहरू फेला पार्न र उनीहरूसित फुटबल खेल्न आफ्नो छिमेकी फर्कन्थे। अँध्यारो नभएसम्म सबै केटाहरूले बल कहाँ थियो भनेर बुझ्न सकेनन्। Sambou Tati ले यो राख्छ;
पॉल पोग्बा हारमा सबैभन्दा खराब थिए। ऊ जहिले पनि रोयो उसको टीम हराउनै सकेन। उसले धेरै गोलहरू गर्दछ, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले अन्य बच्चाहरूको आमा बुबालाई ईर्ष्यामा गुनासो गर्दछ।
सेल्टा डी भिगो र ले हभ्रे पोगबा ब्रदर्सको लागि कल:
किनभने पावल त्यो राम्रो थियो, उनी अमेरिका टोरसीसँग एक मौसम पछि स्पट भयो। यस पटक, यो एक धेरै ठूलो क्लब, ले हभ्रेको साथ थियो। वर्ष २०० Paul पल पोग्बाको परिवारका लागि फलदायी थियो। एक गर्व येओ मोरिबा र फासाउ एन्टोइनले आफ्ना सबै छोराहरूलाई ठूला प्रतिष्ठानहरूमा नयाँ अवसरहरू देखिरहेको देखे।
जुम्ल्याहा (फ्लोरेन्टिन र म्याथियस) ले सेल्टा डे भिगोमा ट्रायलहरू पार गरे जब कि उत्तरी फ्रान्सको नोर्मान्डीमा रहेको ले हभ्रे एथलेटिक क्लबसँगै उनको मौका पाए। उसको छोराहरूलाई अलग गर्ने १,1,550.4 of०..XNUMX किलोमिटरको लामो दूरीमा, येओ मोरिबाले तिनीहरूलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुभयो।
यसैले यिओ मोरिबालाई सुपर मम भनिन्छ। त्यतिखेर, उनी भिगो र नोर्मान्डी बीच आफ्ना बच्चाहरूलाई हेर्न शटल्टिन।
Le Havre बन्ने कप्तान शानदार र फ्रान्स राष्ट्रिय युवाको गौरव:
ले हाभ्रेमा, पावल एक द्रुत सफलता बने। आफ्नो दोस्रो सत्रमा, उनले यसको अण्डर १ 16 टीमको कप्तान बनाउन शुरू गरे। एक बहादुर पोग्बाले आफ्नो टीमलाई क्लबको घरेलु लिगको अन्तिम चरणमा पुर्‍यायो, को Championnat National des 16 उत्तरहरू. यद्यपि प्रतिस्पर्धा जित्न सकेन, सबैलाई थाहा थियो कि पावल निर्माणमा एक ठूलो स्टार थिए।
त्यहाँ पक्कै केहि थिएन जुन सुझाव दिन्छ कि पोग्बाले यस उमेरमा यो बनाउँदैनन्।
साथै आफ्नो दोस्रो सत्रमा, उनको देशले फ्रान्सको राष्ट्रिय अण्डर १। फुटबल टोलीमा सामेल हुन बोलायो। उनको नेतृत्व विशेषता अवलोकन गर्दै, राष्ट्रिय टीम कोच, गाय फेयरियरले उनलाई कप्तान बनायो। पोग्बाको नेतृत्वमा फ्रान्सेली युवा टीमले च्याम्पियनशिपमा शानदार जीत दर्ज गर्‍यो जहाँ उनले ठूलो गोल गरे।
जब उनी राष्ट्रिय उमेर तहसम्म पुगे, पिरे मन्कोव्स्की जस्ता प्रशिक्षकहरूले प्रतिरोध गर्न सकेनन र उनलाई कप्तानको रूपमा पुनःस्थापित गरे। थप सिन्टीलेटिंग प्रदर्शनका साथ, पावल राष्ट्रिय युवाहरूको ध्यान केन्द्रित भए।
तपाईं उसमा एक साँचो नेता को चिन्हहरू देख्न सक्नुहुन्छ। युवाले आफ्नो युवावस्थामा फ्रान्सको कप्तान बनाए।
पल पोग्बाको जीवनी- फेम टु फेम स्टोरी:
दुबै फ्रान्स र ले हभ्रेका लागि सबैभन्दा आशाजनक युवा भएको कारण, कुनै समय नबित्दै पोग्बाले युरोपका ठूला क्लबहरूको चासो लिन थाल्यो। जसले आफ्नो हस्ताक्षर माग्नेहरू मध्ये आर्सेनल, जुभेन्टस र म्यानचेस्टर युनाइटेड थिए। उनीहरूको प्रतिष्ठाका लागि धन्यवाद, उहाँ रेड डेभिलहरूलाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्नुभयो।
ले हभ्रे र म्यानचेस्टर युनाइटेड बीच लडाई:
जुलाई २०० of को st१ औं दिनमा, पोग्बा रे हभिल एकेडेमीमा सामेल हुन ले हभ्रेको प्रस्थान गरे। फ्रान्सेली क्लब दंग रह्यो किनकि उनीहरूले पोग्बाले युनाइटेडका लागि सेवाहरू स्वीकृत गरेनन्। दुःखको कुरा, किशोरी म्यान युनाइटेड र ले हभ्रे बीचको कानुनी लडाई जस्तो देखिन्थ्यो।
पल पोग्बाको युनाइटेडमा पहिलो स्थानान्तरणले ले हभ्रे र म्यान युनाइटेड बीच ठूलो विवाद उत्पन्न भयो।
ले हभरेले भने कि उक्त स्थानान्तरण उल्ट्याउनुपर्नेछ किनकि यसले उनीहरू र पॉल पोग्बाका अभिभावकहरू बीच अविवाहित सम्झौताको उल्ल .्घन गरे। एक दिन पछि, क्लब आलोचना गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा एक आधिकारिक बयान जारी गर्‍यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड र Pogba परिवार। ले हाभ्रेले पनि यो कुरा फिफामा सार्ने आफ्नो इरादा घोषणा गरे जसको लागी उनीहरूले उक्त अवस्थाको छानबिन गर्ने विश्वास गर्दछन्।
परिस्थितिलाई नराम्रो बनाउनको लागि, ले हभरेका राष्ट्रपति जीन-पियरे लुभेलले आरोप लगाए कि पोगबा पैसामा मात्र चासो राख्दै थिए किनभने उनले आफ्नी आमालाई ££,००० डलर र युनाइटेडले एउटा घर दिएको दाबी गरे। जवाफमा, एक रिस एलेक्स फर्गसन क्लबलाई मुद्दा हाल्ने धम्की दिएर मारियो। फिफाले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले क्लबलाई गलत कार्यबाट हटाएपछि अन्तमा म्यान युटीको लागि जीत भयो।
पल पोग्बाको शुरुका वर्षहरू युनाइटेड:
रेड डेभिलहरूमा पहिलो लामो-प्रतीक्षित स्थानान्तरण अन्ततः October अक्टुबर, २०० happened मा भयो। एक वर्ष पछि, पोगबाले म्यान युनाइटेडको यु -१ team टीमलाई सफलतापूर्वक आफ्नो लिग खिताब बचाउन मद्दत गरेर छिटो प्रभाव पार्नुभयो।
महिना पछि, लडाई मिडफील्डर आफ्नो रिजर्भ टीम मा उक्ले जहाँ उहाँलाई काम गर्न खटाइएको थियो पॉल Scholes। पोग्बाले म्यान युनाइटेडका पूर्व लिजेन्डलाई उनका संरक्षकका रूपमा लेबल गरे जसले उनको बल वितरण प्रविधिको निर्माण गर्न मद्दत गरे।
अझै कहिलेकाँही संयुक्त जूनियरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै, पोग्बाले लामो दूरीको गोलहरू बनाउन प्रतिष्ठा कमायो जसका पंडितहरूले वर्णन गर्दछन् पिलिड्राइभर। एलेक्स फर्ग्युसनले क्लबको पहिलो टीम टोलीमा बोलाएको चारवटा एकेडेमी खेलाडीहरू मध्ये यस्तो गुणले पग्बा बनायो।
एलेक्स फर्ग्युसनसँग पावल पोग्बाको झगडा - पूर्ण कहानी:
उसको ठूलो योग्यताका कारण, महान म्यानेजरले जवानलाई आफू पहिलो टीममा कसरी गर्न सक्छु भनेर हेर्न मौका दिए। दुर्भाग्यवस, यो प्राय: दोस्रो आधा विकल्पको रूपमा थियो र यसले तातो टाउको भएको पोग्बा बढ्दो चंचल भयो। उसको शब्दमा;
सर एलेक्स ममा विश्वास गर्थे, तर उनले मलाई प्रयोग गरेनन् किनकि उनले भने, म धेरै जवान थिएँ र खेल सुरु गर्ने मेरो समय आउनेछ। उनले मलाई सहिष्णु पनि गरे कि उनीसँग प्रवर्धन गर्ने अन्य प्रतिभा छ।
मेरो धैर्यता हरायो जब उनले मलाई केन्द्रको लागि पूर्ण ब्याक राफेल छान्छन्, जब त्यहाँ कुनै पोजिसनका लागि कोही थिएन।
मैले प्रशिक्षकलाई भनेमलाई राख्नुहोस् र म तयार छु भने म तिमीलाई देखाउने छु।"अझै, उनले मलाई बेंचमा छोडे र जु सुung पार्कको साथमा राफेल जोडे।
एलेक्स फर्ग्युसनलाई प्रश्न गरिसकेपछि, पौराणिक कोचले पोगबालाई खेल्न इन्कार गरेर सजाय दिए। यो गरीब केटा एक्लै छोडियो। अफवाहको कुरा यो छ कि पावल फर्ग्युसनको अफिसमा धेरै चोटि कराए किनभने उसको व्यवहार गरिएको थियो। केहि समय मा, फर्ग्युसन क्रोधित भयो र उसलाई एक्लै प्रशिक्षणको लागि पठायो।
पल पोग्बा (एक समय युनाइटेड आउटकास्ट) र एलेक्स फर्ग्युसन बीचको कहानी।
फलाम येओ मोरिबा र उनको परिवारका बाँकी सदस्यहरू पावललाई उनको प्यारो क्लब युनाइटेडबाट टाढा स्थानान्तरणको लागि राजी भए। उनले पावलका भाइहरूसँग मिलेर निर्णय गरे कि उनले नयाँ करारमा हस्ताक्षर नगर्ने। फर्ग्युसनले पेट्रिस इभरालाई पोग्बालाई मनाउन पठाए र त्यसले काम गरेन।
जुलाई,, २०१२ मा, पौराणिक कोचले क्लबको सबैभन्दा खराब डरको पुष्टि गर्यो - कि पोगबाले युभेन्टबाट जुभेन्टसको लागि छोडेका थिए। लगातार नयाँ यातनाको बारेमा बोल्दै फर्ग्युसनले उसलाई आफ्नो नयाँ क्लबमा समेत दिए, पोग्बाले एक पटक भने;
मलाई याद छ कि जुभेन्टस जाने after हप्ता पछि सर एलेक्सले मेरो फोनमा फोन गर्यो।
उसले २ 25 मिनेट मेरो खिल्ली उडायो। मलाई सबैभन्दा चिन्ता लाग्ने कुरा त्यो हो कि उनले मेरो मूर्ति, पॉल स्कोल्स प्रयोग गरे।
सर एलेक्सले मेरो अपमान गरे र बारम्बार भने कि म उनको टोलीको लागि राम्रो छैन। उनले मलाई संयुक्तको अनादर गरेको आरोप लगाए।
पल पोग्बाको बायो - सफलता कहानी:
इटालीमा, पोग्बा एकदम फस्टायो। उसले सधैंको लागि चाहेको लगातार खेल समय पाएकोमा धन्यवाद उसले आफ्नो खेललाई अर्को चरणमा उचाल्यो। टुरिनको समयमा उनको मार्चिसियो र विडालसँगको बलियो साझेदारीले जुवेलाई लगातार चार सेरी ए खिताब, दुई इटालियन सुपर कप र दुई कोपा इटालिया जित्न मद्दत गर्‍यो।
उनको पॉल पोग्बाको सफलताको कहानीको अर्को संस्करणमा, उनी फ्रान्सको पोस्टर केटा भए जुन देशले यूरो २०१ 2016 आयोजना गरेको थियो। लेस ब्लेउस टूर्नामेन्ट जित्न मनपर्नेहरू मध्ये एक थिए र पोग्बा स्टार म्यान बने। सँगसँगै उहाँको ठूलो भूमिकाको साथ एन्टोन ग्रिजमन, उसले फ्रान्सलाई फाइनलमा पुग्न मद्दत गर्‍यो, १-० ले मात्र हार क्रिश्चियनो रोनाल्डोको पोर्तुगल।
युरो २०१ 2016 मुटुको ब्रेक पछि, लडाई मिडफील्डरले आफ्नो पुरानो भाग्य महसुस गर्न सक्दछ उसलाई म्यानचेस्टरमा उनलाई कल गर्दै। एलेक्स फर्ग्युसनसँग अब कामको केन्द्रमा छैनन्, पोग्बा आफ्नो आमाको स्वीकृतिमा सहमत भए कि पूर्व जुभ कोच, एन्टोनियो कन्टे एक विश्व रेकर्ड बिक्री भनिन्छ के शुरूआत गर्नु पर्छ।
August अगस्ट २०१ 8 मा, पोग्बा म्यानचेस्टर युनाइटेडमा फर्केर फिल्ड फुटबल ट्रान्सफर शुल्कको लागि १०€ मिलियन डलर (£ .2016 ..105 मिलियन डलर) मा फर्क्यो - त्यो भन्दा बढी Gareth गठरी। को व्यवस्थापन अन्तर्गत Jose Mourinho, पोग्बा (२०१-2016-२०१ season को मौसममा) युनाइटेडलाई ईएफएल कप र यूईएफए यूरोपा लिग उठाउन मद्दत गर्‍यो।
पॉल पोग्बाको सफलताको कहानीमा अर्को मुख्य आकर्षण २०१ 2018 मा आयो - जुन वर्ष उनले आफ्नो प्यारो देशलाई पुरानो २०१ debt को paidण तिरेको थियो। रसियामा भएको फिफा वर्ल्ड कपका लागि फ्रान्स टीमको हिस्साका रूपमा, पौल पोग्बाले प्रतिस्पर्धी नेतृत्व कौशल देखाए जुन उनको युवा कप्तानीको दिनको झलक हो।
सँगै notables जस्तै संग किलियन एमपीपी र Ngolo Kante, कम्भेटिभ स्टारले आफ्नो प्रिय फ्रान्सलाई प्रतिष्ठित फिफा २०१ World वर्ल्ड कप ट्रफी उचाल्न मद्दत गर्‍यो।
यो उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गर्दा उनलाई लिजियन अफ ऑनर अवार्ड प्रदान गरियो। यो फ्रान्समा मेरिटको उच्चतम अर्डर हो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… पॉल पोग्बाले धेरै जोरदार भाषण गरे जसले फ्रान्सलाई फिफा २०१ World वर्ल्ड कप जित्यो। यहाँ कम्पाईल गरिएको भिडियो खोज्नुहोस्।
यो जोड दिन योग्य छ कि पॉल पोग्बा जस्ता खेलाडीले विश्व फुटबलमा एक विशाल नुस्खा प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो केवल उसको कपाल कटाउने र तेजस्वी लुगा इन्द्रियको बारेमा मात्र होइन, तर उसको शैली र खेलको शैली हो जसले उहाँलाई आफ्नो पुस्ताको प्रिय बनाउँछ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो
पल पोग्बाकी पत्नीको बारेमा - मारिया सलास:
उनी ला पियोचेको मुटु पछि महिला हुन्। नोभेम्बर १ 16 1994 of को १th औं दिनमा जन्मेकी मारिया जुलाय सालाउसलाई पॉल पोग्बाकी पत्नीको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। सुन्दर WAG एक दक्षिण अमेरिकी महिला हो, एक बोलिभियाई जन्म र धनी अभिभावकहरु द्वारा पैदा गरिएको - एक धनी पालनपोषण।
मारिया सलाएस पोग्बाले बोलिभिया विश्वविद्यालयमा व्यवसायिक प्रशासन अध्ययन गरेकी छिन् अमेरिका प्रवेश गर्न अघि। उनी मोडेलको रूपमा क्यारियर लिन छोड्नु अघि मियामीमा स्थानीय इस्टेट एजेन्टको रूपमा काम गर्न थालिन्।
त्यो वर्ष २०१ Mar मा, मारिया सालाज भेट र पावल पोग्बाको प्रेममा परिणत भयो। प्रेम चराहरूले आफ्ना भावनाहरू पक्रन सक्दैन किनभने उनीहरूले आफ्नो सार्वजनिक सार्वजनिक महीना पछि पछि गरे। फुटबल प्रशंसकहरू पॉल पोग्बाको पछिल्लो प्रेमिका जो पछि उनकी पत्नी भइन् भनेर छक्क परे।
उनको अनौंठो व्यक्तित्वलाई धन्यबाद, मारिया सालाजलाई यो बहुमूल्य छोराको भावी पत्नी हुन यो मोरिबाको स्वीकृति प्राप्त गर्न कुनै समस्या थिएन। प्रेमको प्रमाणको रूपमा, पॉल पोग्बाकी आमा र तिनकी बुहारी इनलालाई धेरै मुख्य भेटहरू देखा पर्‍यो। यसले फ्यानहरूलाई एक आपसमा प्रेम गर्यो भनेर सहमत हुन बनायो।
जुन २०१ 2018 मा फिफा अगाडि (फिफा विश्व कपको क्रममा) मारिया सलाउजले सगाईको औठी लगाएको देखिन्छ जुन सुझाव दिन्छ कि पावलले प्रस्ताव गरेका थिए। उनले फ्रान्सको विश्व कप समूह खेलमा डेनमार्कको बिरूद्ध मस्कोको लुझ्निकी स्टेडियममा येओ मोरिबाको छेउमा एउटा सीट लिएकी थिइन।
अर्को कुरा प्रशंसकहरूले सुने, पल पोग्बा र मारिया जुलाय सलायूहरू बीचको अफवाहको विवाहको बारेमा खबर थियो। पोगबाकी पत्नी सोशल मीडियामा परिवर्तन बाहेक यस दम्पतिले कुनै आधिकारिक घोषणा गरेका थिएनन्। उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता बन्द गर्‍यो र यसलाई नयाँ नाम "मारिया जुलाय पोग्बा सलास" को साथ सक्रिय गर्‍यो। यस कार्यको साथ, फ्यानहरूले विश्वास गरे कि बोलिभियाको मोडेल र पोगबा आधिकारिक रूपमा विवाहित छन्।
पल पोग्बाका बच्चाहरू को हुन्?
२०२१ को शुरुआतमा कभ्याटिभेन्ट मिडफिल्डरको एक छोरा छ जसको नाम लैबिले शाकुर छ, जसको कुनै छोरी छैन। पॉल पोग्बा र मारिया सलाउजले जनवरी २०१ of को day तारिखमा आफ्नो पहिलो र एक मात्र बच्चालाई स्वागत गरे। उनको श्रीमतीसँगै हुँदा उनले बच्चा जन्माउँदा पक्कै पनि पावलका लागि अविस्मरणीय क्षण थियो।
धेरै महिनासम्म उनको जन्म पछि, पोग्बा र मारियाले लैबिल शाकुुरलाई सार्वजनिक नजरबाट टाढा राख्नको लागि शुरूमा प्रयास गर्‍यो। धेरै पछि, दुबै प्रेमीहरूसँग उनीहरूको सामाजिक मिडिया खाताहरूमा flaunting सुरु गर्नु भन्दा अर्को विकल्प थिएन।
पल पोग्बाको छोराको लागि, लेबल शाकुर:
उसले आफ्नो केटाको लागि चाहेको इच्छा सरल छ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई कल्पना गर्ने सबैभन्दा उत्तम जीवन बनाउनु हो। दोस्रो, जब उनले (पॉल पोग्बा) आफ्नो क्यारियरको बिदाइ गरे, तब लेबल शाकुरले परिवारको सपनाहरुमा जीवन बिताइरहेको देख्नको लागि योजना तयार गर्नु हो। लामो दुरीका शूटरलाई आफ्नो छोरालाई दुलहाउने तरिका थाहा छ। केहि बुबा-छोरा क्षणहरू हेर्नुहोस्, जुन प्रेम र हेरचाहलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ
Labile शाकुर पोग्बा २ बर्ष र ० महिना पुरानो छ। उसको बुवाको सहयोगमा, केटाले, भविष्यमा उसले भविष्यमा के राख्छ भनेर बुझ्ने छैन। पॉल पोग्बा लेबल शाकुरलाई निरन्तर पोषण गर्दछ एक पेशेवर फुटबल खेलाडी बन्ने बाटोमा - उहाँ भन्दा पनि राम्रो।
आमा वा बुबा बन्नु पावलको लागि सजिलो छ। उसले आफ्नो परिवारको लागि खेल विचारहरूको एक ठूलो स got्ग्रह प्राप्त गरेको छ, यहाँ सम्म कि एक सामाजिक मिडिया फुटबल चुनौतीहरूमा भाग लिन्छ। ती मध्ये एउटा - (टिश्यु पेपर गेम) मा मारिया र पावलसँग शकुरको राम्रो योगदान थियो।
पल पोग्बा विगतका सम्बन्ध- (पूर्व प्रेमिका)
मारिया Zulay सलास आफ्नो जीवनमा आउनुभन्दा पहिले, त्यहाँ अर्की महिला रहेको थियो। यस खण्डमा, हामी विस्तारमा वर्णन गर्दछौं, पॉल पोग्बाको विगतको सम्बन्ध। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
द पॉल पोग्बा, लिसा थाओलोन प्रेम कहानी:
फुटबल प्रशंसक उनको एक पतला र मीठो अनुहारको साथ सुन्दर श्यामला को रूप मा उल्लेख गर्छन्। उनी लिसा थाओलोनबाहेक अरू कोही थिइन, जो एकाएक अस्पष्ट पारिएको थियो। पल र लिसा ती दिनहरूमा धेरै मिल्दोजुल्दो थिए - केवल अज्ञात कारणहरूले गर्दा उनीहरूको सम्बन्ध अन्त्य हुन। अब म तपाइँलाई पॉल पोग्बाको पूर्व प्रेमिका बारे थोरै बताउन चाहन्छु।
उनको स्नातकोत्तर पछि, लिसा थाओलोन पेरिसको प्रतिष्ठित आईडीआरएसी बिजनेस स्कूलमा भर्ना भइन् जहाँ उनले सफलतापूर्वक डिप्लोमा प्राप्त गरे। एक उत्कृष्ट द्विभाषीको रूपमा, उनले चाँडै इटालीको लागि आफ्नो मार्ग फेला पार्न। २०१ 2013 मा, लिसा थाओलोनले जुभेन्टससँग सहायक घटनाक्रम र आतिथ्य प्रबन्धकको रूपमा काम पायो। यहीं उनी भेटिन्, प्रेममा परिणिनुभयो र पॉल पोग्बाकी प्रेमिका बन्नुभयो।
मिडिया रिपोर्टमा यस्तो लेखिएको छ कि लिसा थाओलोनले (प्रेमको कारण) उनी म्यान युनाइटेडका लागि हस्ताक्षर गरेपछि उनको अनुसरण गर्न इ England्गल्याण्डको पावललाई पछ्याउने काम त्यागे। दुःखको कुरा, नयाँ सम्बन्धमा उनीहरूको सम्बन्ध टिकाइएको थिएन। उनको प्रेमीको कुख्यातताको बावजुद उनी मिडियामा भन्दा पनि विवेकी भइन् र उनीले पहिलेको जुवे मानिससँग किन बिच्छे भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन।
पल पोगबा व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू:
यहाँ, हामी तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछौं। पॉल पोग्बा एक बहिर्गमन, सामाजिक आत्मविश्वास भएको व्यक्ति। फुटबलबाट टाढा, मिडफिल्डरसँग विलक्षण र ऊर्जा दुवै प्रवृत्तिहरू छन्। पोग्बालाई सुन्न र नृत्य संगीत मनपर्दछ, फेसनदार कपडा र गहना लगाएर।
पोग्बा हास्य, विवेकी, धेरै महत्वाकांक्षी, स्वतन्त्र र जीवनमा एक व्यावहारिक दृष्टिकोण छ को एक अद्वितीय भावना संग एक मानिस हो। हामीले एउटा भिडियो कम्पाईल गरेका छन जुन उनको स्वतन्त्र उत्साहित व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्दछ।
पल पोग्बा कपाल संग्रह:
फुटबलरमा देख्न सकिने चीज भनेको उसको कट्टरपन्थी टाउको काट्नु हो - उसको आमा (योयो मोरिबा) को हात रहेको भन्ने एउटा गुण। पल पोग्बाले एकपटक भने कि उनको केशमा अनन्त परिवर्तन उसको आमाबाट आएको थियो जसले उनलाई उत्प्रेरणा दियो। हामीले पोग्बाको कपालको केहि उत्तम संग्रह उठायौं।
पल पोगबा बास्केटबल शौक:
संयुक्त राज्य अमेरिका मा वर्षौं मा लीग को विकास संग, वरिपरि जान धेरै प्रेम छ। पॉल पोग्बा बास्केटबल र एनबीए को प्रशंसक हो कि केहि विश्व स्तरीय फुटबलरहरु मध्ये एक हो। उसलाई एनबीए बास्केटबल खेलहरूमा भाग लिन मन पर्छ र उसको मनपर्ने प्लेमेट छ Romelu Lukaku.
पोग्बा र श्रीमती मारिया सलाज अमेरिकामा धेरै बास्केटबल भ्रमणमा भेटिएका छन्। के देखिन्छ देखि, उहाँ धेरै टीमहरूको प्रशंसक जस्तो देखिन्छ उनीहरू मध्ये मियामी हीट र गोल्डेन राज्य योद्धा हुन्। हामीले पल पोग्बा बास्केटबल कौशलको भिडियो तैयार गरेका छौं।
पल पोग्बा कसरत:
पोगबुम, जसलाई उनी प्राय: उपनाम पाउँदछन्, कट्टर प्रशिक्षणमा भिन्नता राख्दछन्। उसले आफ्नो लामो दूरी को शूटिंग शक्ति, रणनीतिक र अस्तित्व सीप सुधार गर्न को लागी प्रयोग गर्दछ। इन्स्टाग्राम मार्फत किकबक्सि hardcore हार्डकोर कसरत भिडियोहरू अपलोड गर्दा, फुटबलरले एक पटक भने;
जो कोही मलाई रागेन गर्न कोशिस गर्दै छन् एक नराम्रो आश्चर्यको लागि हुन सक्छ। यसलाई शो-अफ वा प्रेरणा कल गर्नुहोस्, यसले मलाई अन्तमा समान परिणाम दिन्छ।
तपाईंलाई मनोरन्जन गर्न र तिनका सम्भाव्यताको बारेमा सावधान रहनको लागि हामीले ला पिओचेको कसरतको भिडियोहरू कम्पाइल गरेका छौं।
पल पोग्बा जीवनशैली:
यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई उसको जीवन शैली थाहा दिन्छौं। २०१ World विश्वकप विजेताले आफ्ना ठूला पैसालाई कसरी उडाउने भनेर जान्न तपाईंलाई आफ्नो जीवनशैली राम्रोसँग बुझ्नको लागि मद्दत गर्दछ। सुरु गरौं उसको मोटरगाडीबाट।
पल पोगबा कारहरू:
कार पोग्बाले स्वामित्त्व प्राप्त लगभग यस्तै प्रसिद्ध र उहाँलाई चिनिन्छ। फ्रान्सेली फुटबलर बजारमा उपलब्ध सबै भन्दा विलासी, महँगो, र उच्च-टेक कारहरू तिर लाग्छ। उसलाई अडी कार मोडेल मन पर्छ, जो पछाडि वा सेतोमा आयो। ती मध्ये केही यहाँ हेर्नुहोस्।
पल पोग्बा हाउस:
सज्जित फ्रान्सेली मानिससँग आफ्नो हवेलीमा रात दिन बिताउने विलासिता छ जुन महल जस्तै देखिन्छ। तल चित्रित, पॉल पोग्बाको घर म्यानचेस्टरको सबैभन्दा अनन्य र लोभ गरिएको इलाकामा अवस्थित छ।
फुटबलरले इ England्ल्याण्डको हवेलीमा रोयल्टीको रूपमा बाँच्न लाखौं खर्च गरेका छन। अब हामी तपाइँलाई पल्गबाको घरको भव्य आन्तरिक र बाहिरी व्यक्तिहरूको भ्रमण गरौं।
पलको लागि, छुट्टीको मौसम जडान गर्ने, प्रेम फैलाउने र उहाँसँग नजिक हुनेहरू मनाउने उत्तम समय हो। उनले आफ्नी श्रीमती मारिया र छोरा शाकुरसँगै एक साहसी साना परिवार बनाए। पोग्बाले आफ्नो 40० मिलियन भन्दा बढी आईजी अनुयायीहरूलाई आफ्नो सुन्दर अवकाश अभियानका दृश्यहरू विस्मित गर्न कहिल्यै रोक्दैन।
पल पोगबा पारिवारिक जीवन:
केवल फुटबल खेल्ने परिवारका रोटी खाने व्यक्तिले आश्रित प्रियजनहरूलाई असफल हुन नदिन बलिदानको मात्रा बुझ्छन्। फुटबलबाट टाढा, पॉल पोग्बा यी धेरै व्यक्तिहरूमाथि आफ्नो उत्तरदायित्व जान्दछन्। यो केवल नजिकको परिवार होइन, तर आफन्तहरू (काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजाहरू) हुन् जसले उहाँलाई खोज्दछन् - उनीहरूको रोटी जुटाउने।
Lifebogger यो सेक्सन को उपयोग गरेर तपाइँ पॉल Pogba आमा बुबा, भाइहरु र आफन्तहरु को बारे मा अधिक तथ्य बताउन। परिवारको टाउकोबाट सुरु गरौं।
पल पोग्बाको बुबाको बारेमा:
विश्वको एक समयको सबैभन्दा महँगो फुटबलरका बुबा फासो एन्टोइन पोगबालाई भेट्नुहोस्।
१ 1940 s० को दशकमा जन्मे फासो एन्टोइन पोग्बाले शुरुआती जीवन एमेच्योर फुटबलरको रूपमा गुयनामा बिताए। Of० बर्षको उमेरमा उनी पेरिसमा बसाई सरे। दुःखको कुरा, फासाउले मलाई थोरै अवसरहरू दिए र फुटबल र अनुहारको अध्ययन छोड्नुपर्‍यो।
उनको जबरजस्ती सेवानिवृत्ति पछि, उनले रोइसे-एन-ब्रीको वरिपरि एक स्कूलको शिक्षकको रूपमा काम गर्न शुरू गरे। फासाउ एन्टोइन पोग्बा पछि स्वास्थ्य चुनौतिहरूको कारण आफ्नो अन्तिम निवृत्ति हुनु अघि टेलिकम्युनिकेशनमा बदल्नुभयो।
टेलिकम इञ्जिनियरको रूपमा आफ्नो जीवनबाट टाढा, उनी एक सच्चा परिवारका मानिस थिए जसले सधैं आफ्ना केटाहरू र उनीहरूका साथीहरूलाई फुटबल खेल्ने बानी बसाल्दछन्। कहिलेकाँही उनी उनीहरुका व्यक्तिगत कोषहरु उनीहरुमा स्थानीय क्लब, मार्सिले (पॉलको बाल्यकाल क्लब) हेर्न जान्छन्।
आफ्नी पत्नी येओ मोरिबासँगको बिछोडका कारण, फासो एन्टोइन आफ्ना बच्चाहरूका लागि विशेष गरी उनीहरूको किशोरावस्थामा टाढा भए। आफ्नो छोराको व्यवसाय (फुटबल) मा संलग्न नभए पनि उनी उनीहरुको क्यारियरको जग हाल्दा श्रेय पाउँछन्। पहिले नै भनेझैं, फासो एन्टोइनले आफ्ना छोराहरूलाई सीममा धकेले कि उनीहरू सफल हुने जहाँ उनी फुटबलमा असफल भए।
पावल पोग्बाको बुबासँगको सम्बन्ध:
फुटबलरले बुबालाई नम्र र शान्तिमय मायालु मान्छेको रूपमा देख्छ। पल पोग्बा पहिले उनीसँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्न असफल भए तर उनी प्रख्यात भएपछि यसलाई सच्याए। आफ्नो पूर्व पत्नी विपरीत, Fassou Antoine एक कम प्रोफाईल राख्न संग सहज महसुस।
पल पोग्बाले आफ्ना आमाबुबालाई एकतामा बाँध्नु र उसको स्वास्थ्य राम्रो नहुने बुबासँग हराएको समयको लागि मेकअप गर्न अनिवार्य बनायो। आफनो दुर्भाग्यवश मृत्यु हुनु भन्दा अगाडि आफ्नी पत्नीसँग पुनर्मिलन गरे र छोराहरूप्रति सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेकोमा फासो एन्टाइन खुसी छन्। पल पोग्बाका बुबा-the वर्षको उमेरमा दीर्घकालीन बिमारी पछि मरे - शुक्रबार मे २०१ 79 को १२ औं दिनमा।
एक पॉल पोग्बाको उनको बुवाको सबै भन्दा राम्रो स्मृति उनलाई कसरी आफ्नो फुटबल गोल उत्सव डाब प्रदर्शन गर्ने सिकाउँदै थियो। लेट फासो एन्टोइन आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा ठीक अघि डब प्रदर्शन गरिरहेको भिडियो खोज्नुहोस्।
पल पोग्बाकी आमाको बारेमा:
प्राय जसो रूपमा उल्लेख गरिएको छ मम्सो, यो मोरिबा पोग्बा एक समयको संसारको सब भन्दा महँगो फुटबलरको पछाडि व्यवसायिक दिमाग हो। त्यहाँ फुटबल व्यवसाय टाइकुनको बारेमा एक प्रकारको प्राकृतिक स्वैगर छ - एक बकवास महिला जसले आफ्नो छोरालाई स्टाइलिश कसरी देखाउन सिकाउँछिन्।
येओ मोरिबाको उनको अन्तिम जन्मेको बच्चाको सम्बन्ध उसको बाल्यकालदेखि नै विशेष रही आएको छ। वास्तवमा, पॉल पोग्बाले पारिवारिक प्रभावको बच्चाको धेरै आनन्द लिनुभयो। अनलाइन रिपोर्टमा यो छ कि ऊ अत्यधिक लाडले आफ्नी आमाले प्यार गर्छ जसले उसलाई उसका छोराहरू भन्दा फरक व्यवहार गर्‍यो।
पल पोग्बाकी आमाले आफ्नो प्रख्यात फलामको इच्छाले आक्रमण गरे पछि यति लोकप्रियता पाए
फर्ग्युसन उनको छोराको उपचारको बारेमा। उनको अनुसार,
"जब फर्गसन मेरो घर आउँदछ, म निश्चित छु कि ऊ डिसप्पोनाइटेड छ। मैले सँधै उसलाई भनेको थिएँ, मेरो छोरा पॉल यस करारमा पुनः हस्ताक्षर गर्दैन। यसको परिणामको रूपमा, फर्ग्युसनले उनलाई धकेले, उनी उनलाई खेलेन, मेरो बच्चा पाउल एक्लो थियो। उनले फरिसीको कार्यालयमा क्रुसमा झेल्नु पर्थ्यो मार्गमा जसै उनी चोट पुर्‍याएको थियो।
पौल पोगा त्यो हो कि स्कूलले जनवरी २०१ IN मा उनको छह महिनाको पुन: प्राप्तिबाट पछाडि बढायो जुन उसले आँखा उठायो। केवल १ 2012 समय मा, पोगालाई उसले आफ्नो मौका दिनुहोस्। यो मेरो पुत्रले क्लब छोड्ने निश्चय गर्यो "।
सबै हाम्रो ट्रबलहरू छोड्नुहोस्, एक चमत्कारपूर्ण पक्कै हुन्छ। मेरो छोरो एक ज्युभेन्टसमा हिट भयो। नावाडे तपाईले भन्न खोज्नु भयो कि म फुटबलको बारेमा थोरै मात्र जान्दछु, म एक साधारण आमा हुन सक्छु तर यस व्यवसायमा मेरो पतन हुन सक्दैन, "
धर्मावलम्बी मुस्लिम सुपरममले आफ्नो छोरा (पॉल पोग्बा) लाई कुनै समयमा कुनै मिलियन मिलियन डलरको भाग्यमा परिणत गर्‍यो। उनको छोराको एजेन्ट, प्रबन्धक र सल्लाहकार हुन रुचि, यो मोरिबा उनको फुटबल व्यापार साम्राज्य निर्माण गर्दा पर्याप्त धन र शक्ति कमाएको छ।
पॉल पोग्बाको पहिलो इशारा जब उसले ठूलो पैसा कमाउन शुरू गर्‍यो जब एक संयुक्त खेलाडीले येओलाई नयाँ हवेली किन्नको लागि रहेको थियो। घमण्डी आमालाई थाहा छ कि निजी जेट, फ्ल्याश कार र नगदीका सामानहरू जुन पावलमा फ्याँकिएको छ त्यसको मतलब उसले आफ्नो परिवारलाई राखेको प्रेमको तुलनामा केही पनि होइन।
तलको भिडियोको आधारमा, तपाईं मसंग सहमत हुनुहुनेछ कि पौल पोग्बा आफ्नी आमाको जीवनको एch्कर हो। पावल र येओ मोरिबाको बीचमा भएको प्रेम जत्तिकै त्यस्तो कुनै विशेष कहिल्यै भएको थिएन न त पहिला कहिल्यै भएको थियो।
पल पोग्बा ब्रदर्स:
बक्स-टु-बक्स मिडफिल्डर 'टेस्टोस्टेरोन' को घरबाट आउँदछ। यो एउटा दाजुभाइहरूको घर हो र कुनै अविवाहित बहिनी। पल पोग्बाका जेठा भाइहरू - फ्लोरेन्टिन र म्याथियस दुबै फुटबलर र उस्तै जुम्ल्याहा हुन् - उनी दुई वर्ष जेष्ठ थिए। तल चित्रित, दुबै भाइबहिनीले आफ्नो बाल्यकालको दिनदेखि नै आफ्नो सानो भाइको फिर्ता पायो।
जुम्ल्याहा बच्चाहरू जन्मेका थिए, येओ मोरिबा, आइतवार, अगस्त १ 19 1990 ० को १ day औं दिन कोनाक्री, गिनीमा। तीनै केटाहरू बच्चाहरूका रूपमा मार्सेली फ्यान थिए र उनीहरूको सबैभन्दा अविस्मरणीय बाल्यावस्थाको क्षण १ 1998 XNUMX of को क्रिसमसको दिन थियो जब तिनीहरू सबै गएका थिए र सान्ताको ग्रोटोसँग बसेका थिए।
तीनै साना केटाहरू दुबै फुटबल खेलाडी भए र उनीहरूको परिवार पनि स्टार बने। फ्लोरेन्टिन पोग्बा
हामी पोग्बा भाइहरूमा अन्य दुई चीजहरू साझा भेट्दछौं। सबैभन्दा पहिले, तिनीहरू मध्ये एकपटक टेबल टेनिस बाहिर उभिए - तर फुटबलर फोकस थियो। दोस्रो, तिनीहरू ए-वर्ग नर्तक हुन्। हामीसँग प्रमाणको एक टुक्रा छ जुन उनीहरूको नृत्य चालहरूको लोकप्रियतालाई प्रदर्शन गर्दछ Pogbance.
फ्लोरेन्टाइन पोग्बाको बारेमा:
अगस्त १ 19 1990 ० को १ Day औं दिनमा जन्मनुभएको, उहाँ एक गुयना पेशेवर फुटबलर (राष्ट्रिय कप्तान) हुनुहुन्छ जसले डिफेन्डरको रूपमा खेल्नुहुन्छ। फ्लोरन्टाइन आर्सेनललाई समर्थन गर्दै हुर्के - तिनीहरूको अजेय मौसम पछि।
एक समय, विश्व फुटबल फुटबल प्रशंसकहरूले एक धेरै दुर्लभ झलक देखेका थिए जुन पॉल पोग्बा परिवार वास्तवमा कति नजिकको थियो। यो त्यस्तै भयो जब दुई जना भाइहरू; फ्लोरेनटिन र पावल ओल्ड ट्र्याफर्ड मा एक अर्को सामना।
त्यो दिन थियो Zlatan Ibrahimovic आफ्नो पहिलो ह्याट ट्रिक युनाइटेड शर्टमा समाते जब होस्टहरूले सेन्ट-इटिएन्नेलाई विश्वस्त पारे। खेल पछि, प्रशंसकहरु आफ्नो ह्याट्रिक नायक सराहना पछि थिएनन्। यो पोग्बा भाइहरू थिए जसले त्यस दिन सबैको ध्यान आकर्षित गरे। २०२१ सम्ममा, फ्लोरेन्टाइन सोचाक्ससँग खेल्दछ।
फ्लोरेन्टिन पोग्बाकी श्रीमती सरिता हो। दुबैको शुक्रबार, १ December डिसेम्बर २०१ 13, बिस्टी-सेन्ट-जर्ज (Seine-et-Marne) को टाउन हलमा विवाह भयो।
तल फ्लोरनटिन पोग्बाको सरिताको विवाहको भिडियो हो। पाहुनाहरूको स्ख्यामा पॉल पोग्बाका आफन्तहरू समावेश छन् जो करीव १ .० जति छन्।
मथियस पोग्बाको बारेमा:
अगस्त १ 19 1990 ० को १ Day औं दिनमा जन्मनुभएको, उहाँ एक गुयना पेशेवर फुटबलर हुनुहुन्छ र टेबिल टेनिस विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। म्याथियस फासाउ पोग्बा एक पटक किशोरावस्थामा टेबल टेनिसमा फ्रान्सका सबैभन्दा चम्किला तारा थिए। उनले आफ्नो फ्रान्सेली क्षेत्र को लागी खेल 'राष्ट्रिय U12 प्रतियोगिता जित्यो। जे होस् टेबल टेनिस उसको लक्ष्य थिएन, यिओ मोरिबाले उनी फुटबलमा नै रहेको कुरा सुनिश्चित गरे।
फ्लोरेन्टाइन विपरीत, उनी बढी लोकप्रिय र पावलको नजिक छ। यो किनभने उसले केही अ team्ग्रेजी टिमका लागि खेलेको थियो क्रिभ अलेक्जान्ड्रा - जहाँ उनले धेरै गोलहरू बनाए। उनी पल पोग्बाको फाउंडेशनको एक सक्रिय सदस्य हुन्।
मथियस पोगबा एक व्यापारी हुन्। उनीसँग R R रु रु नोल्ट, 97०१75017 पेरिस, फ्रान्समा अवस्थित ला रुच इंक र बार्बर टुर्स छ। यो त्यहाँ पोल्ग पोगबा हरेक चोटि फ्रान्स जान कपाल काट्छन्। फुटबलर पनि h 48 घूर लागुलीको मालिक हो, एक एनजीओ जसले गिनी र अफ्रिकाको बाँकी ठाउँका लागि खेलकूद र मनोरन्जन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दछ।
पल पोग्बा आफन्तहरू:
वास्तवमा लेस ब्लेस मिडफिल्डर परिवारको मूल्यमान्यतासँग धेरै नै संलग्न छ। पावल - आफ्नो व्यस्त तालिकाको बावजूद - प्राय: भेट्नको लागि समय सिर्जना गर्दछ र आफन्तसँग सम्बन्ध। ती मध्येका उनका बिरालो काका पनि हुन् जसले एकपटक पीडित र दुर्भाग्यवश क्यान्सरबाट मरे।
पॉल पोग्बाका काकाले आफ्नो बिमारीको बखत व्हीलचेयर प्रयोग गर्थे र उनको छोरीले उनलाई हेरचाहमा राखेका थिए जसलाई पॉल पोग्बा आफ्नी बहिनी भनेर सम्बोधन गर्छन्। यो फुटबलर आफ्नो काकाको अगाडि जानुभन्दा अघि केही दयालु क्षणहरू साझेदारी गरेकोमा गर्व गर्दै थियो। ती मध्ये एक उनको भतिजाले जितेको विश्व कपको भावना महसुस गर्दै थियो।
पल पोग्बाका हजुरबा हजुरआमा ढिलो हुन सक्ने सम्भावना छ जबकि तिनका आफन्तहरूको ठूलो स Gu्ख्या गिनी र कo्गोमा छ (उनका आमाबुबाको उत्पत्ति)। यद्यपि हामीसँग उनका एक नातेदार छन् - उनकी सासु। उनी मारिया जुलाइ सालासकी आमा हुन्।
मारिया जुलाइ सलाउजका अभिभावक मध्ये एक भेट - उनको आमा। उनी राम्री छैनिन?
पल पोग्बा अनटोल्ड तथ्यहरू:
पोग्बाको अविश्वसनीय जीवन कहानी को माध्यम बाट यात्रा गरिसकेपछि, हामी सत्यको अनावरण गर्न यो खण्ड प्रयोग गर्नेछौं (केही) जुन तपाईंलाई फुटबल सुपरस्टारको बारेमा कहिल्यै थाहा थिएन।
तथ्य # १ - पॉल पोग्बा म्यानचेस्टर युनाइटेड तनखानी ब्रेकडाउन र नेट वर्थ:
युरो मा आय (£)
प्रति महिना € 1,428,926 £ 1,258,600 $ 1,720,600
प्रति हप्ता € 329,246 £ 290,000 $ 396,451
प्रति दिन € 47,035 £ 41,429 £ 56,636
प्रति घण्टा € 1,959 £ 1,726 $ 2,359
प्रति मिनेट € 32 £ 28 $ 39
प्रति सेकेन्ड 0.54 £ 0.48 $ 0.65
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो पल पोग्बाको बायो, यो उसले युनाइटेडसँग कमाएको छ।
म्यानचेस्टरको औसत नागरिक जसले प्रति वर्ष, १,, .19,499। कमाउँछ उसले काम गर्नुपर्नेछ चौध वर्ष र 10 महिना पल पोग्बाको महिना बनाउन।
पोग्बाको प्रमुख प्रायोजकत्व स्पोर्ट्सवेयर निर्माता एडिडाससँग २०१ year मा हस्ताक्षर गरिएको १० बर्षे सम्झौता हो। कम्पनीले उनलाई ag१ मिलियन डलर ($ m० मिलियन) भुक्तानी गर्‍यो। जब उसको सक्रिय ड्युटी कमाई, प्रायोजन र बोनसको वर्षहरू सँगै जोडिएको थियो, पॉल पोग्बाको २०२१ कुल सम्पत्ति करिब to २०० देखि २$० मिलियन डलर अनुमान छ।
तथ्य # १ - पल पोग्बाको घण्टीको बारेमा:
२०१ F फिफा विश्व कप पछि, मिडफिल्डर र एन्टोन ग्रिजमन एक विचार विकसित गर्नुभयो जुन उनीहरूलाई सुपरोब्बल प्रेरणाबाट प्राप्त भयो। उनीहरूले फ्रान्स विश्वकपको विजयी टीमको लागि उपहारको रूपमा स्मारकको औंठी किने। गहना टुक्रा तिनीहरूका विजयको बाँकीको रूपमा कार्य गर्दछ। पल पोग्बाको औंठीको लागत $ १,,13,500०० (, १०,२10,260०) - प्रत्येकको लागि।
तथ्य # १ - फीफा शक्ति र कमजोरीहरू:
म्यानचेस्टर युनाइटेडमा उनका उचाइ र पछाडि भए पनि, पॉल पोग्बा अझै फुटबल भिडियो गेम शृंखलाको एक मिडफील्डर्सका रूपमा उत्कृष्ट छन्। तल देखाइए जस्तै धेरै कुञ्जी शक्तिहरूसहित, उसको कमजोरी रहन्छ; त्वरण, एकाग्रता, सन्तुलन, क्रसिंग र अन्तिममा। पल पोगबा तुलनात्मक रूपमा धेरै छन् Bruno Fernandes उहाँ भन्दा अलि राम्रो को छ?
तथ्य # १ - पॉल पोग्बाको धर्म:
फ्रान्सेली पावरहाउस विश्वासद्वारा अभ्यास गर्ने मुस्लिम हो। फुटबल ड्युटीमा हुँदा, खेलमा जानुभन्दा पहिले उनी छोटो प्रार्थना गरेको देखिन्छ। विश्व स्तरीय फुटबलर बन्न ठूलो मागको बाबजुद, पॉल पोग्बाको बलियो इस्लामिक संस्कृति छ। उसले अरब संस्कृति अनुसरण र सम्मान गर्दछ।
पौल पोग्बाको धार्मिक विश्वासले उनको जीवनलाई असर गर्दैन किनभने पवित्र रमजानको दौडान उसले प्रशिक्षण र खेल खेल्छ। फ्रान्सेली बाल्यावस्थादेखि नै एक भक्त मुस्लिम भएका छन् - आफ्नी आमाले विश्वास गरे पछि। पोग्बा धेरै मुस्लिम फुटबलरहरूका लागि रोल मोडेल हो। उसले आफ्नो धार्मिक विश्वास र परिवारको प्रेमलाई सबै भन्दा माथि राख्छ। यहाँ पोग्बाको भिडियो छ जसरी उसले आफ्नो धर्म - इस्लामप्रतिको ठूलो प्रेम देखाउँदछ।
तथ्य # १ - मारिया सलुसा एक मुस्लिम हो?
पल पोग्बाकी श्रीमती एक मसीही परिवारबाट आएका हुन्। वास्तवमा, नाम 'मारिया' बाइबलीय हिब्रू नाम हो। यो मानिन्छ कि मारिया जुलायको पॉल पोग्बासँगको विवाहले उनको इस्लाम धर्म परिवर्तन गर्‍यो। उनको ड्रेसिंगबाट हेर्दा, उनी मुस्लिम हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।
तथ्य # १ - के पावल पोग्बा उनीहरूका दाज्यू-भाइ भन्दा ठूला छन्?
कागजमा, फ्लोरेन्टिन सबैभन्दा अग्लो देखिन्छ। ऊ १. 1.92 २ मिटर अग्लो छ जुन। फिट र 6.। इन्च अग्लो छ। अर्कोतर्फ, दुबै पल र म्याथियस १.3.5 १ मिटरमा उभिएका छन् जुन ft फिट 1.91..१ इन्च अग्लो छ।
भर्खरको अनुसन्धानमा, हामीले पत्ता लगायौं कि माथिको वक्तव्यले वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्दैन। फ्लोरनटिनको सरितासँग विवाहको बखत, तीनजना केटाहरू एक समूहको फोटोका लागि भेला भए। समान स्तरको मैदानमा उभिएर, पौल पोग्बा (सब भन्दा कम जुत्ताको हिल सहित) आफ्ना दाइहरूमध्ये सबैभन्दा अग्लो देखिन्छ।
तथ्य # १ - पल पोग्बा सर्वश्रेष्ठ मित्र:
युवाको करियरको अन्तिम दुई वर्ष म्यानचेस्टर युनाइटेड (२०० to देखि २०११ सम्म) बिताउँदा पोग्बा भेटिए र जेसी लिंगार्डको साथी बने। दुबै फुटबलरहरूले ट्राफी एकसाथ जितेका छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूको उत्सव नृत्य चरणहरूमा प्रशंसकहरू खुशी छन्।
फुटबलि fromबाट टाढा, ती जोडीले गीतहरूमा नाच सारेर प्रशंसकहरूको मनोरन्जन गरे - विशेष गरी नाइजेरियामा जन्मेका कलाकार, विजकिडद्वारा रिलीज गरिएको। यो भिडियोले पोग्बा र लिard्गार्डको बीचको ब्रोमान्सलाई सारांशमा प्रस्तुत गर्दछ।
तथ्य # 8 - पॉल पोग्बाको उपनामहरूको अर्थ:
सबैभन्दा पहिले उहाँ जुभेन्टसमा हुँदा आउनुभयो। त्यो उपनाम - 'पॉल अक्टोपस' - एक लोकप्रिय अक्टोपस पॉल नामबाट आएको हो। २०१० को विश्वकपको दौडान उनी भविष्यवाणी गर्ने खेलको लागि प्रयोग गरिएको थियो।
पल (अब ढिलो) ग्लोबल स्पोर्ट्स सट्टेबाजी अरबपति मालिकहरू द्वारा मारिएको कुराको अफवाह छ। जनावरले उनीहरूलाई अरबौं गुमाउन बाध्य तुल्यायो किनकि यसले विश्व कप फुटबल खेलको सफलतापूर्वक भविष्यवाणी गरेको थियो बक्समा झुकाएर - जसको मतलब त्यो देशले यसको अर्को खेल जित्नेछ।
पोग्बाले आफ्नो 'पल अक्टोपस' उपनाम पायो किनभने त्यसको लामो, लचिलो र लम्बाएको अंग जुन प्रशंसकहरूले प्रशंसा गरे। उनीहरु भन्छन् कि उसको खुट्टा अक्टोपसको डेरा जस्तै छ जब उनीहरुलाई टुक्र्याउँछ, दगुर्छ, चलाउँछ र लामो दूरीको शटहरु प्रहार गर्दछ।
पावल पोग्बाका ठूला भाइहरूले उनलाई उपनाम दिएPogboom'गोल मा उनको लामो दूरी को प्रयास को लागी धन्यवाद। लामो दूरी दायर शूटरले यसको बुटमा कुँदिएको छ। अन्तमा, उपनाम अब धेरै प्रशंसकहरु लाई सामान्य छ ला पिओचे.
आजकल, आधुनिक फुटबलको क्लासिक ट्रप त्यो ठूलो स्टार हो (जस्तो किलियन एमपीपी) सडकबाट आउनुपर्दछ जुन अपरिहार्य रूपमा कठोर छ, र त्यसो गर्दा अपराधको जीवनबाट जोगिन सकिन्छ। पॉल पोग्बाको अवस्था यस्तो छैन किनकि उहाँ एक मध्यमवर्गीय फ्रान्स परिवारको मापदण्डबाट हुनुहुन्छ।
पल पोग्बाको जीवनी हामीलाई सिकाउँछ कि जादूको माध्यमबाट सपना वास्तविकतामा परिणत हुँदैनन्; यो पसीना, दृढ संकल्प, कडा परिश्रम र परिवारबाट समर्थन लिन्छ। यो लाइफबगरले योयो मोरिबाको प्रयासको सराहना गर्दछ - आमाको आइरन लेडी जसले एch्कर, पाल र आफ्नो छोरालाई मार्गनिर्देशन दुबैको अभिनय गरेकी छिन्।
बचपनको जीवनी कथा बताउने क्रममा हामीले सत्यता र निष्पक्षताका लागि प्रयास ग .्यौं पॉल पोग्बा एक मानिस जससँग दुबै प्राइड र टेलेन्ट छ। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन राम्रो लाग्दैन भने, यो लेख्न-अप र मिडफिल्डरको बारेमा टिप्पणी दिनुहोस्। पॉल पोग्बाको बायोको द्रुत सारांश प्राप्त गर्न, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
जन्म मिति: मार्च १ 15 1993 XNUMX को १th औं दिन।
जन्मस्थान: Lagny-sur-Marne, फ्रान्स।
अभिभावक: येओ मोरिबा पोग्बा (आमा) र लेट फासाउ एन्टोइन पोग्बा (फादर)।
पत्नी: मारिया Zulay Pogba।
बच्चा: लेबल शाकुर।
भाइहरू: म्याथियस र फ्लोरेन्टिन पोग्बा (जुम्ल्याहा)।
बहिनी: कुनै पनि होइन।
आफन्तहरू: सरिता पोग्बा (ब्रदर्स वाइफ) प्लस अरु।
पारिवारिक मूल: बुबा गुन्आका हो र आमा कo्गोबाट।
उचाइ: सेन्टिमिटरमा (१ 191 १ सेमी), मीटरमा (१. 1.91.6मीटर), फिट र इन्चमा (ft फिट 3.1..१ इन्च)
छाती नाप: 45 ईन्चहरू।
फोहोर र बाइसेप मापन: In 34 ईन्च (कमर) र १ In ईन्च (बाइसेप्स)।
शिक्षा: Roissy-en-Brie (फुटबल स्कूल) र Homeschooling (उनको आमा द्वारा)
उपनामहरू: पल अक्टोपस, पगबूम, ब्ल्याक स्पार्टकस र ला पिओचे।
खेल्ने स्थिति: केन्द्रीय मिडफील्ड।
मानिस संयुक्त वार्षिक तलब: £ 15,103,200
नेट वर्थ (२०२१): $ 200 देखि million 250 मिलियन
फुटबल मार्गनिर्देशक: पल स्कोल्स।
युवा टोली: रोसी-एन-ब्री (१ –––-२००1999), टोरसी (२००–-२००2006), ले हभ्रे (२००–-२००2006) र म्यानचेस्टर युनाइटेड (२०० – -२०११)।